Ngaba Unako Ukuma Amaqanda Ekupheleni Nge-Equinox?
Bathi u-Einstein wayenokungathembeki, kodwa ngokuqinisekileyo wakha wakuva ngale "nyaniso"
Ngomhla wama-20 ngo-Matshi ngunyaka wokuqala wentwasahlobo, okanye i- equinox yesi-vernal , njengoko kwaziwa kubafundi beenkwenkwezi-intsingiselo yegama "okanye ngokuphathelele entwasahlobo," i- equinox ithetha "ubusuku obulinganayo." Njengoko i-angle yokutshintsha kwelanga ilanga lushintsha unyaka wonke, iyakwandisa okanye iyanciphisa iintsuku ngokuhambelana nexesha kunye ne-hemisphere, kukho amaxesha amabini ngonyaka xa imini nobusuku bebude obungalingani ngokulinganayo: i-spring and autumnal equinoxes.
La maphupha asetshentsheni asezulwini afunyenwe ngamawaka eminyaka kwaye anikezelwa kwiqela elithatha ixesha lonyaka.
Uhambo lokufa nokuzalwa kwakhona
Isishicilelo sele sigubha kuyo yonke imbali yabantu njengexesha lokuzalwa kwakhona kokomoya kunye nokomoya emva kokufa "konyaka" ebusika. Imikhosi yasendulo yaseJalimane ye-Ostara (ngokuhlonipha unkulunkulukazi owaziwa nangokuthi ngu-Eostre) wagubha ukubuya kwendlela yokukhanya kunye nobomi kunye nemikhuba yokuzala kunye nempawu, ezinye zazo zisaphila kwimikhosi yanamhlanje yekhefu lobuKristu i-Easter, ewela ngokuqhelekileyo NgeCawa yokuqala emva kwenyanga yokuqala epheleleyo emva kwe-equinox yesi-vernal.
Equinox kunye namaqanda
Iqanda liyona ndlela ebonakalayo kwaye iyacaca kuyo yonke impawu zokuzala, amasiko asekuqaleni amaqanda awasinda nje kuphela ngendlela yokuzingela iqanda kunye neentshukumo zamaqanda e-Easter kodwa kunye nokukholelwa inkolelo inkolelo, ngokuqhelekileyo kubangelwa yiTshayina, ukuba unako ukuma amaqanda aluhlaza ekupheleni ngomhla wokuqala wokusasa.
Kubonakala ukuba oku kuvela kwimbono yokuba ngenxa yegama elilinganayo lelanga phakathi kwezibonda zomhlaba ngexesha le-Equinox, iimbutho ezikhethekileyo zokukhusela ziyasebenza.
U-Einstein kuthiwa wayengathembeki (ugxininiso malunga nokuchazwa , njengoko kungekho bubungqina bokuba u-Einstein uke wakwenza uluvo malunga nalo mbandela), kwaye kufuneka ukuba ube njalo.
Nangona kuyi nyaniso ukuba phakathi kwentwasahlobo kunye nokuwa kwe-equinox i-axis yomhlaba ijikelezileyo elangeni, ukwenza imini nobusuku ubude obulinganayo, akukho sizathu senzululwazi sokuthi ukulungelelaniswa okunjalo kunokwenza nayiphi na into ebonakalayo kwizinto eziqinileyo apha emhlabeni. Ngaphezu koko, ukuba i-equinox inokubangela ukuba le nto ingabonakaliyo, kuba kutheni abanye? Kutheni singaboni abantu bemi amapensele, i-lollipops, kunye nezinja ezitshisa ixesha elide ekupheleni kosuku lokuqala kwentwasahlobo okanye ekwindla? Kutheni amaqanda kuphela ( kakuhle, kunye nomhlaza )?
Anditsho ukuba akunakwenziwa - ukuma amaqanda aluhlaza ekugqibeleni, ndiyathetha - ngokuqinisekileyo inako, kodwa kuthatha umonde, amaqanda asemgangathweni ofanelekileyo (isilingo kunye nephutha yindlela kuphela yokuzifumana), i-pinch yetyuwa ukuba zonke izinto zihluleka, kwaye-nansi "eyimfihlo" yazo yonke into-isebenza ngokufanelekileyo naluphi na unyaka wonyaka.
UDkt. Phil ulahla ngokufanelekileyo yonke le ntetho yezinto ezinamandla ezinxulumene ne-equinox njenge-hooey engunokwenzululwazi, kodwa ungavumeli ukuba kukuyeke ukuqokelela abahlobo kunye nosapho malunga nabo ukuze uzame ukulinganisa amaqanda.
Ngaba uMarie Antoinette uthi "Bavumele Batye Ikhekhe"? Kubonakala kungekhona
I-Bogus Khrushchev 'Imilinganiselo emancinci yeSocialism' Quote yenza kwakhona iiRounds
Umntu Ugcina Umfazi Ofile KwiGlasi Itafile Yekhofi!
Ukufa kweMickey encinane ngePop Rocks kunye neSoda
Ingaba Intaba Intaba Ibulala I-Sperm?
UStalin: "Akunabo abantu abavota ukuba Bala ..."
Imisebenzi yokufudumala kunye namaFillers eklasini yamaFrench
I-Stag beetles, Family Lucanidae
Ubumbano Ubuthetha ntoni kwiMathematika?
Injongo yebhokisi lePandora
Ukusebenzisa i-Soldering yokwenza iigugu
Izifundo ezisisiseko zeJedi
Imisebenzi yeeholide zasebusika kuMgangatho ophakathi noPhakamileyo weSikolo